Asivimbe ukunyuka kwenani lesinkwa
Njengoba kulindeleke ukuthi ukubiza kwesinkwa kunyuke , imiphakathi entulayo kuzoba yiyo, njengokujwayelekile, elimalayo. UMgcinimafa kaZwelonke kufanele angenele lolu daba, aqikelele ukuthi izinkampani ezikhiqiza isinkwa azilikhuphuli inani lesinkwa ngokungenasidingo, aqikelele ukuthi labo abathembele kuHulumeni abahlukumezeki.
Ukunyuka kwesinkwa kuzokwenza impilo ibenzima kulabo abantulayo, labo isinkwa siwukudla okuyisisekelo. UMgcinimafa unamandla okubhekana nalokhu. Kufanele sibambisane ekunxuseni uMgcinimafa kaZwelonke ukuthi angenele lolu daba aphinde aqikelele ukuthi amanani esinkwa awanyuki.
Ngqongqoshe weziMali Gordhan kanye noNgqongqoshe weZokuhweba neziMboni Davies,
Sinxusa kini ukuthi nehlise intela yokolweni ongena ezweni ngokuphuthumayo, ukuze sikwazi ukugwema ukunyuka kwenani lesinkwa. Sinxusa kini ukuthi nibheke lolu daba ngokubambisana neKhomishana Lokuncintisana ukuze kubhekwe kabanzi imikhuba yokuzuza esetshenziswa izinkampani ezikhiqiza isinkwa.
Isinkwa siwukudla okuyisisekelo emiphakathini eminingi entulayo. Sinxusa kini ukuthi nivikele lemiphakathi kulokwenyuswa kwenani lesinkwa yizinkampani ezisikhiqizayo okulindelekile. Abantulayo abakalulami ekunyukeni kombila kanye nezimpahla zobisi, futhi bayahluleka ukuthenga izimpahla eziyisisekelo. Ukunyuka kwesinkwa kuzokwenza izinto zibe zimbi kunalokho, ikakhulu kulabo abesifazane abamnyama okuyibona abanakekelayo emindenini eminingi.
UMgcinimafa kaZwelonke kufanele angenele ekuvimbeni izinkampani ezikhiqiza isinkwa ekukhuphuleni inani lesinkwa ngolulawula ukubiza kwesinkwa kanye nokwehlisa intela yokolweni ongeniswa ezweni.